Ukuthengiswa kweMango - Iingubo ezisisiseko ozifunayo ngeli xesha | Bezzia
Iimpahla ezisisiseko oya kuzifumana kwiintengiso zeMango
USusana godoy | 14/01/2022 10:00 | Ndinxiba ntoni
Las Ukuthengiswa kweMango Bankqonkqoza emnyango wakho kwaye ngoku ungafumana izaphulelo ezothusa ngokwenene. Yiyo loo nto ungafanelanga uphoswe lithuba lokonwabela isambatho ngasinye esikukhethele sona. Kuba uya kuzidinga kwimihla ngemihla kuba zisisiseko ngokwenene.
Ukongeza koku, sele uyazi ukuba intengiso ihlala ilixesha elifanelekileyo lokufumana iindaba onokuthi uzithwale kwiinyanga ezininzi. Izambatho ezisebenzayo ukuba uya kufumana kwakhona kolu khetho lulandelayo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ingantoni? Qaphela kakuhle nganye kuzo ukonwabela esona sitayela sibalaseleyo kweli xesha lonyaka!
1 Iijezi zeMango ezithengiswayo kunye neekhati
2 Iidyasi zithengiswa
3 Iilokhwe okanye iziketi?
4 Iibhulukhwe zedenim kunye needungarees
Iijezi zeMango ezithengiswayo kunye neekhati
Iintengiso zemango zifika zigcwele Iimbono ezintle malunga nee sweatshi kunye neekhati. Yingakho kwimeko yokuqala, siya kufumana izambatho ezibanzi, njengomgaqo oqhelekileyo, oya kusinika induduzo yosuku ngalunye. Kodwa ayisiyiyo yonke loo nto, kuba kwelinye icala iziseko ezinkulu ziya kuhlala zikho kwicala lethu kodwa ukongezelela kuzo, iinkcukacha ezinje ngeerhinestones, i-embroidery okanye i-necklines enesitampu ayifuni ukuphoswa yiparade. Kungenxa yoko le nto unokukhetha iindidi ezininzi ngamaxabiso aphantsi kunokuba unokucinga.
Ngokuqinisekileyo, ukuba ukhetha ukunxiba ibhatyi, uhlala unokhetho kunye nangaphezulu kwi-firm. Kuba nazo zivela naloo finish ebanzi ukusishiya lula zidibanise kunye ne-ribbed t-shirts okanye i sweatshi phantsi kwazo. Ngoku lixesha lokukhetha iingubo ezithambileyo nezilula, kunye namaqhosha amakhulu ukunika ingubo yobuntu, ukuba kunokwenzeka. Imibala engathathi hlangothi okanye esisiseko iya kuba ngabalinganiswa abangunaphakade.
Ngokuqinisekileyo ngeli xesha lonyaka enye yempahla engaphezulu kwesisiseko iwela kwiidyasi. Ngenxa yokuba zezona zivumela ukuba sikhululeke ngakumbi kwaye ngokuqinisekileyo, sihlala sisuka kubanda. Ngoko, kwelinye icala, sahlangula ingcamango engaphezulu kweyona nto ifanelekileyo phakathi kweentengiso zeMango kwaye kukuba yingubo eguqulwayo. Ke sinesibini komnye kwaye siyayithanda loo nto: Kwelinye icala, isiphumo solusu ngelixa kwelinye, iya kuba bunwele obusigcina sifudumele.
Kodwa ukuba uthanda iidyasi ukuba Aziphumi kwisimbo njengoko zinokuba ngezaboboya kwaye kabini-breasted, wena kwithamsanqa. Kubonakala ngathi le nkampani ibaqaphele. Ngenxa yokuba zezinye zezinto ezisisiseko kwaye esinokuthi ngazo senze ukugqiba kunye nezitayela ezahlukeneyo. Ukusuka kwezo zidityaniswe neejini njengezinye i-semi-formal kunye neebhulukhwe zelaphu. Ixhomekeke kuwe!
Iilokhwe okanye iziketi?
Ukuba kunzima kuwe ukuba ukhethe, ngoko ke kungcono ukhethe kuzo zombini. Ngenxa yokuba kwelinye icala Iilokhwe ze-midi kunye ne-ribbed zihlala ziyinto ebalulekileyo. Kangangokuba unokubakhapha ngevest, ibhanti elibanzi okanye ngaphandle kwento ebanika bonke ukuvelela. Ngakolunye uhlangothi, ii-skirts ezifikelela emadolweni kunye neprints kwimibala esisiseko nayo enye yeendlela ezilungileyo zokudibanisa imfashini kubomi bethu bemihla ngemihla.
Iibhulukhwe zedenim kunye needungarees
Isitayela se-cowboy sasingenakulahleka phakathi kweengubo ezithengiswayo. eMango. Kodwa kule meko besifuna ukubaqaqambisa ngebhibhi. Ngenxa yokuba ihlala ingenye yeengubo ezibonelela ngentuthuzelo enkulu kwaye njengoko kunjalo, zifanele ukuba zibekho ebomini bethu. Ngoku, iibhulukhwe ezithe ngqo kunye nelaphu azikho ngasemva. Kungenxa yokuba sinokubabonisa ngomsebenzi okanye kwezo ntlanganiso zibalulekileyo. Yiba nokuba kunjalo, balinde wena kwiintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Ndinxiba ntoni » Iimpahla ezisisiseko oya kuzifumana kwiintengiso zeMango
Iingcebiso ezilungileyo zokuhamba
Iintshaba ezi-5 zobudlelwane